Hidilyn Diaz, vehivavy filipiàna mpibata fonjamby tafiditra ao anatin’ny tantara raha nahazo ny medaly volamena Olaimpika ho an’i Filipina · Global Voices teny Malagasy
Nolotoina izy tamin'ny 2019 rehefa nitady fanampiana hanomanana ny Lalao Olaimpika
Voadika ny 29 Jolay 2021 5:48 GMT
Pikantsary avy amin'ny tatitry ny vaovao avy ao an-toerana nataon'ny ANC News.
Faka tàhaka ho an'ireo Filipinos manerana izao tontolo izao i Hidilyn Diaz, vehivavy mpibata fonjamby, tamin'ny nahazoany ny medaly volamena olaimpika voalohany ho an'i Filipina. Tamin'ny 26 Jolay 2021, lasan'i Diaz ny toerana voalohany ao amin'ny sokajy A misy ireo vehivavy 55 kg mpibata fonjamby nandritra ny Lalao Olaimpika 2021 fanao amin'ny Lohataona tao Tokyo.
224 kg no fitambaran'ny zavabita olaimpika vitan'i Diaz, resiny ilay Shinoa, Liao Qiuyun, izay nahazo ny medaly volafotsy tamin'ny fitambaran'ny zavabita 223 kg ary i Zulfiya Chinshanlo, avy any Kazakhstan, nahazo ny medaly alimo tamin'ny 213 kg. Diaz no vehivavy atleta filipiàna voalohany nahazo medaly olaimpika roa taorian'ny efa nahazoany medaly volafotsy nandritra ireo Lalao Olaimpika tao Rio de Janeiro tamin'ny 2016.
Toarian'ity fandresena manantantara ity, nifanesy nandefa ny fiarahabàna ho an'i Diaz ny filohan'i Filipina, Rodrigo Duterte, sy ireo manampahefana ao amin'ny governemanta, ary nisy mihitsy aza tomponandraikitra iray nanosotra azy ho “harem-pirenena.” Na izany aza, vetivety ireo olompirenena dia naka ny Twitter mba hampahatsiahy ny vahoaka ireo habibiana teo aloha nataon'ny governemanta tamin'ilay nahazo medaly volamena olaimpika, tamin'ny fanamarihana fa io vehivavy io dia efa “nampidirina tanaty lisitra mena”, midika fa noampangain'ireo manampahefana tsy an-drariny ho voarohirohy miaraka amin'ireo kaominista mpihoko.
Nolazain'ny governemantan'i Duterte fa voarohirohy amina firaisana tsikombakomba hanozongozonana fanjakana tamin'ny 2019 ity atleta 30 taona ity, taorian'ny nitodihany tamin'ny media sôsialy mba hangatahana fanohanana ara-bola hanomanany ny firotsahany hanao ny Lalao Olaimpika 2020 fanao amin'ny Lohataona ao Tokyo. Natsofoka mihitsy koa aza izy ho ao anatin'ny lasitr'ireo fikambanana sy olontsotra notondroina ho “fahavalom-panjakàna”.
Hidilyn Diaz was maliciously tagged in Duterte ouster plot after she voiced the extreme lack of support for athletes in the Philippines. THIS IS A POWERFUL AND SYMBOLIC WIN— and a huge F U to a gov’t that lets its people down AND that looks down on women.pic.twitter.com/aGasvJp6c1
— Ash Presto 💜 (@sosyolohija) July 26, 2021
Tamin-karatsiam-panahy no nampidirana an'i Hidilyn Diaz ho isan'ireo mpiray tsikombakomba hanongana an'i Duterte taorian'ny nitenenany momba ny fahambangàna goavana amin'ny fanohanana ireo atleta ao Filipina. FANDRESENA MAFONJA SADY MARI-PAMANTARANA IO – ary OMPA goavana atao amin'ny governemanta izay tsy miraharaha ny vahoakany SY manao tsinontsinona ny vehivavy.
Ny toedraharaha manahirana niainan'i Diaz dia endrika mampiseho ny tsy fisian'ny famatsiambola maharitra ataon'ny fanjakàna ao Filipina amin'ny fanatanjahantena.
Ilay “lasitra firaisana tsikombakomba” navoakan'ny governemantan'i Duterte dia voakiana be ho nampihena ny habaka demaokratika ho an'ireo tsy mitovy hevitra aminy, ary na teny anivon'ireo olontsotra milaza ny ahiahiny any anaty media sôsialy aza dia nisy ny fanosorana azy ireny ho toy ny mpikambana na mpanohana ireo vondrona “kaominista” sy “mpampihorohoro”.
Navadiky ny mpitondra tenin'ny filohampirenena ireo fitakiana fialantsiny imasombahoaka amin'i Diaz, tamin'ny fandàvana hoe tsy namoaka lasitra tahàka izany mihitsy ny governemantan'i Duterte.
Worse, she was red-tagged when she was placed at the “Red October” plot matrix by the Duterte regime, which was proven to be a hoax.
Zara raha nahazo tohana avy amin'ny governemanta i Hidilyn Diaz.
Ny ratsy indrindra aza, lasa tao anatin'ny lisitra mena izy rehefa napetraka tao anatin'ilay lasitry ny firaisana tsikombakomba “Oktobra mena” navoakan'ny fitondran'i Duterte, izay voaporofo fa fandisoam-baovao.
Noho io dia nisotasotàna izy, saingy vao mainka nihasahy. Ankehitriny, isalorany ny medaly volamena voalohany ho an'i Filipina.
Saron'ny fandreseny ny kabarim-panjakana nataon'i Duterte ho an'ny firenena – State of the Nation Address (SONA). Saika ireo teboka napetraky ny filoha hiadiana amin'ny zavamahadomelina, ny kaominista, ary ireo mpanakiana no noventiventesin’ ilay kabary naharitra 2 ora sy 15 minitra, zara raha nanisy teny momba ny valanaretina COVID-19 ao amin'ny firenena sy ny fiharatsian'ny olana ara-toekarena sy sôsialy. Taminn'ny fankahàrana ireo sakana nataon'ny pôlisy sy ny herisetra, an'arivony ny olona nanao diabe nanohitra ilay SONA nataon'i Duterte tao amin'ny renivohitry ny firenena ary ireo tanàndehbe hafa tao Filipina.
Tao anatin'ny SONA 2021 nataony, nanao antso ihany koa i Duterte ho an'ny pôlisy sy tafika hitifitra avy hatrany ireo kaominisita, tamin'ny fanindriana fa hahafaly azy tokoa izany.
Thank you Hidilyn Diaz for giving us a reason to be proud to be Filipinos today. 🇵🇭
Tamin'ny andron'ny SONA farany nataony, norombahan'ny vehivavy iray natsofoka tsy an-drariny ho ao anatin'ny lasitry ny zavamahadomelina ny medaly volamena olaimpika voalohany ho an'i Filipina. Fifanandrifiana ve sa fambara? Vehivavy no olombelona mijoro farany indrindra.
Isaorana ianao Hidilyn Diaz tamin'ny nanaomezanao anay antony hahazoanay Filipiàna mirehareha androany 🇵🇭
Tsy vita ny tsy hisisika hilaza fa ny zavanisy hoe i Hidilyn Diaz, izay nitondra rehareha sy voninahitra betsaka ho antsika, dia efa tao anaty lisitra mena ary nohenjehan'ny fanjakana noho ny nitenenany ny tsy rariny, araka izany dia miendrika tononkalo tsotra izao ilay hoe tamin'ny SONA farany nataon'i Duterte no nahazoany ilay medaly volamena
Taorian'ilay kabary lava sy manjombona nataon'i Duterte, fandresena tena nilaina ny nahazoan'i Diaz medaly volamena ho an'i Filipina izay efa leon'ny valinteny tsy mahomby avy amin'ny fitondràn'i Duterte momba ny valanaretina sy ny fanamafisany ny famelezana ny demaokrasia.
17 ora izayHong Kong (Shina)